चोलेन्द्रका वकिल कुटिए, को हुन् रामधुलाई गर्ने अर्का ओकिल ? — Imandarmedia.com
चोलेन्द्रका वकिल कुटिए, को हुन् रामधुलाई गर्ने अर्का ओकिल ?
काठमाडौ। नेपाल बार एसोसिएसनको परिषरमा एक कानुन व्यवसायी कुटिएका छन्। शुक्रबार बारको बैठक जारी रहँदा अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल कुटिएका हुन्। चुडाल विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुलाई अन्तर्वार्ता दिँइरहँदा अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेले उनीमाथि कुटपिट गरेका हुन्।
इजलास नचल्दा सेवाग्राही मर्कामा परेको भनेर अन्तर्वार्ता दिइरहेको बेलामा आफूमाथि न्यौपानेले कुटपिट गरेको उनको आरोप छ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बारको बैठक बसेको थियो।
बहसका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका चुँडालको इजलाश बस्न नसक्दा न्यायालय प्रभावित भएको विषयमा सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिएका थिए । मिडियामा न्यायालयविरुद्ध किन बोलिस् भन्दै ममाथि हातपात गरियो’, चुडाँलले बार परिसरमा पत्रकारहरूसँग भने।
दुवै अधिवक्ता नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन आबद्ध हुन्। न्यौपाने पूर्वन्यायाधीश नरेन्द्र न्यौपानेका छोरासमेत हुन्। न्यौपाने प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिएका छन् भने चुडाँल न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कारको विरुद्धमा छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सरकारमा आफ्नो भाग खोजेको भन्दै अदालतका न्यायाधीश र बारले आन्दोलन गरिरहेको छ। उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न पर्ने एक शुत्रीय माग राखेका छन्।
यसैगरि , इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गर्दै रिट दर्ताका लागि पेस भएको छ ।न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको, बन्दी तथा थुनुवाहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत प्रभावित भएकाले मुद्दा हेर्ने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मासहित कृष्ण प्रसाई, तोयानाथ ढुंगाना, सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीले शुक्रवार पेस गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा पेसी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्न र इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नका लागि विपक्षी न्यायाधीशहरूका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले निकास दिन पर्ने भन्दै गत सोमबारदेखि सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजिनामा दिनु पर्ने विषय चर्किदै जाँदा वकिलहरुबीच नेपाल बार एशोसियसनमै वार भएको छ।नेपाल बार एशोसिएसशनको भवन परिसरमा दुई जना अधिवक्ताबीच कुटा कुट भएको छ।
अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडालले इजलास चल्नुपर्ने राय राखेर मिडियामा आफ्नो भनाई राखिरहेको बेलामा अर्का अधिवक्ता विराट न्यौपानेले उनीमाथि प्रहार गरेका छन्। कुटाई खाएका अधिवक्ता चुँडालले भने आफू कानूनी उपचारमा जाने बताईसकेका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर बारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। न्यायाधीशहरुले पनि इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्। तर, कानून व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । केही कानून व्यवसायीहरुले यसरी न्यायालयलाई बन्धक बनाउन नहुने धारणा राखेका छन् ।
वकिल माथि हातपात गर्ने अर्का वकिल विराट न्यौपानेले त्यस लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदा पत्रकारको कार्ड समेत हेरेका थिए । किन हात हालेको भनेर प्रश्न गर्दा तपाई कस्तो पत्रकार हो ? कार्ड देखाउँनुस भन्दै उनले कार्ड हेरेका थिए ।
तपाईले नसा सेवन गर्नु भएको छ की के हो ? भन्दा उनले तपाईले चाँही गर्नु भएको होला भन्दै मुख मुखै लागेका थिए । हातपात गरेको नभई नसियत मात्रै सिकाएको जिकिर गर्दै न्यौपानले पर्यो भने फेरी पनि हान्ने बताएका छन् ।
यता पिटाइ खाने वकिल भूमिनन्द चुँडाल भने बार परिसरमै डाँको छोडेर रोएका छन् । आफु माथी हात पात हुँदा पनि बारका पदाधिकारी कोहि नबालेको भन्दै उलने यो व्यवस्थानै समाप्त हुन पर्ने बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्षका खुलेर लागेका उनी जबरालेनै गणतन्त्र सिध्याएर राजतन्त्र ल्याउँने बताए । राजतन्त्र जिन्दावाद भन्दै उनले पूर्व राजाका पक्षमा रुपैँ नारा लगाएका थिए ।